0.1 "嘿，杰里，ngingenza kanjani imali yokubhuloza njengakho?"
0.2 Izibonelo zokuphila zangempela 纳粹ezinye zezikhala zami zezivakashi esikhathini esidlule. Izinto ze-3 ongazenza okwamanje ukuze uthuthukise ibhulogi yakho Imikhuba yokubhuloga ukwandisa amathuba akho okuphumelela Ukungena ekuthengiseni okubambisanayo：Isiqondiso sabaqalayo I-2。 Ukuthunyelwa kwe-众包
0.3 I-4。 Okuthunyelwe kwebhulogi ehlanganisiwe kwamanye amasayithi athandwayo
0.6 I-7。 Ukuthunyelwa kweforamu
0.7 I-8。 Umphakathi we-Google +
0.8 I-9。 Ukunikeza amathuluzi mahhala namahholo wehholo
1 Imibono yokwenza imali：Izindlela ezihlakaniphile ze-3 zokwenza imali ibhulogi yakho
1.1 I-Idea＃1-Bhala futhi uthengise i-eBook
1.2 Nansi Inqubo ongayilandela ukubhala电子书：
1.3 I-Idea＃2：Khuthaza imikhiqizo ebambisene ngezimo ezihlukahlukene
1.4 乌姆昆多（Umqondo）＃3：Hamba Ibhodi lomsebenzi
"嘿，杰里，ngingenza kanjani imali yokubhuloza njengakho?"
Njalo manje ngithola imibuzo "yokwenza imali在线" Kusuka kubangani nomndeni.
Abanye bafisa uku qala ibhulogi futhi wenze ingxenye ethile engenayo inthanethi。阿班耶（Abanye），乌普努尤卡（Ukuphunyuka），乌姆库本（Noma）.
Ngifisa ngempela ukusiza labo engazi ukuthi bafeze lokhu。 Kodwa，ngiyakwazi ukwabelana okuningi ngesikhathi sokuhlangana komuntu noma i-Whatsapp noma i-Facebook Messenger.
Ngakho-ke，ngibhala lesi sihloko eside ukuxoxa ngezifundo engizifundile njenge-problogger eminyakeni eyi-15 yokugcina.
纳粹ezinye zezikhala zami zezivakashi esikhathini esidlule.
Ukungena ekuthengiseni okubambisanayo：Isiqondiso sabaqalayo
I-2。 Ukuthunyelwa kwe-众包
Ukuthunyelwa kwezikweletu kuyindlela enhle yokuxhuma nabanye abasebenzisi be-blogger ku-niche yakho bese wabelana ngokucophelela ngabanye abalandeli bezindaba zenhlalo yomphakathi.
Ngithole（futhi ngibone abanye abaningi befika）eminye imiphumela emihle ngaleli qhinga。 Lokhu ukuthunyelwa kwabantu abaningi ekukhangiseni kwe-Triberr ukuthi ngisanda kukhishwa ekutheni ngifakwe ngaphezu kwama-tweets we-1,000 esikhathini esifushane kakhulu.
纳粹amasampula ambalwa wesikhangiso engiye ngakwenza ku-Facebook kamuva.
Funda futhi-Imibiko ye-20 engeyona intshisekelo ekugxilwe kuyo inhloso yomkhankaso wakho wesikhangiso se-FB olandelayo.
I-4。 Okuthunyelwe kwebhulogi ehlanganisiwe kwamanye amasayithi athandwayo
Thuthukisa ibhulogi yakho kumasayithi ahlanganisa okuqukethwe komunye; ukuzikhuthaza，ukucela，ukufumbathisa，noma ukuxolisa（kuhle，ngibamba），乌克兰人ukwamukela ibhulogi yakho，onondla ekuvumelaneni kwayo.
Qinisekisa ukuthi okuthunyelwe kwakho okusha kubuyela emuva kokuqukethwe kwakho okudala ukuze udwebe emotweni。 Ibhulogi ye-WHSR ihlanganiswa nenani lamasayithi athandwayo afaka phakathi I-社交媒体Namuhla futhi Umphakathi we-Business 2.
Yenza abangane abasha是在线博客作者futhi ukhuthaze amabhulogi abo komunye nomunye。 Angikujabuleli ngokukhethekile ukukhuluma nabantu engingabazi（ngokweqiniso angimubi kangako）.
WebSummit 2014 eDublin kwangilethela ulwazi olusha，futhi kufanele ngivume ukuthi kuyindlela ephumelelayo yokukhuthaza ibhulogi.
Shiya amazwana akhayo kubhulogi labanye（ungagxeki！）。 Bhala ngendlela eyenza abantu bafune ukuthola okuningi ngawe.
库卡拉，uMnu。米勒·埃托拉·伊米宁宁·韦恩（Miller uthola imininingwane ethile），恩尼克扎·乌姆波诺（Oenoo oyingqayizivele） Ngokuhlanganyela okwahlangenwe nakho kwakhe，ubonisa ubuchwepheshe bakhe emkhakheni wokusesha，uthola ukunakwa kwami futhi angidonsele ukuze ngifunde kabanzi ngaye ….
I-7。 Ukuthunyelwa kweforamu
Thola izinkundla ezifanele ku-niche yakho（Usesho lwe-Google "伊格玛·艾灵古希耶" + inurl：isithangami），ukuthumela okuqukethwe okuwusizo，izimpendulo，ukugqugquzela isayithi lakho ngezixhumanisi zesiginesha noma ukuhambisa izixhumanisi ezikhundleni zakho，kodwa kuphela lapho kufanelek.
I-8。 Umphakathi we-Google +
Umphakathi我们在Google+中的使用-Google博客-isihluthulelo sokuphumelela ukunikeza ulwazi olubalulekile kumalungu omphakathi ngokushintshanisa okulandelwayo kwezokuxhumana kanye nokuthungwa kwebhulogi.
I-9。 Ukunikeza amathuluzi mahhala namahholo wehholo
Wonke umuntu uthanda amahhala。 Ngemuva kwabo bonke abangathandi ukuthola okuthile mahhala?
Nokho，kumbula ukuthi akuwona赢得了ama-freebies awodwa。 Udinga ukunikeza okuthile okudingekayo ukuze unikeze umphakathi isizathu sokukhuluma nokwabelana ngebhulogi yakho dischargehonjeni yezenhlalo。 Khumbula iphuzu lonke lokhu mayelana nokuthola ithrafikhi.
Web Hosting Secret Revealed（WHSR）邮件隐藏显示（WHSR）。 Esikhundleni sokucindezela ngaphakathi kwe-Google SERP egcwele，ngighole ukungahle okungcono okuhloswe ngabaqambi bewebhu okungenzeka basebenzise iseluleko sami sokubamba。 Ukuze Ngihlale Esihlalweni纳拉博·阿巴拉莱利（Ngidale Imithwalo Yamahhala）.
Labo imithwalo yezimpawu zamahhala？ I-Yep-免费赠品ehloselwe izilaleli zami eziyinhloko.
Izimpawu zamahhala empeleni zithole ukunakwa okukhulu kubhulogi，ukuletha izivakashi ezintsha nabalandeli bezenhlalakahle。乌玛（Uma unesithakazelo）.
Abalandeli bezenhlalakahle bahlangana ngokuqondile ngemali engenayo.
Imali engenayo nabalandeli be-Twitter
Ababhulogi abaningi bayazibuza ukuthi yiziphi izimetri zokuthembela uma kuziwa ekukhuleni imali yabo。 Amadoda e-Authority黑客ahlangene ngenzuzo ngeqembu喇嘛度量标准futhi akukho lutho olungasondela kunabalandeli be-Twitter.
Uma ufuna ukukhulisa imali yakho，gxila ekuxhumeni nabantu酋长yezenhlalo futhi ubabandakanye ngokuqukethwe kwakho。 Lokho kudutshulwa kwakho okuhle ekuthuthukiseni umugqa wakho ophansi!
Ikhula Abalandeli Bakho-推特kanye nethrafikhi
Amathiphu ambalwa okusheshayo ekukhuliseni abalandeli bakho futhi uqondise ithrafikhi kusuka ku-Twitter：
推特njalo。 Ukuze abalandeli bakho babuye babuye bese uchofoza izixhumanisi zakho ze-tweet，kuzodingeka uvele kuqala ebusweni babo be-Twitter。 Ukwenza lokhu ngisebenzisa i-plugin okuthiwa Buyisa i-Old Post futhi usebenzise amaminithi angu-20-25 njalo ngosuku ku-Commun.it ukuze uhlanganyele nabalandeli bami be-Twitter.
Xhuma ngempela nabalandeli bakho。 Umlayezo womuntu siqu olula u-100x kangcono kunokudlula amakhulu emilayezo engenalutho.
Yenza okungahambi kahle-phendula ama-tweets abanye，ujoyine izingxoxo ezidumile，nama-hashtag ahamba phambili we-tweet.
Imibono yokwenza imali：Izindlela ezihlakaniphile ze-3 zokwenza imali ibhulogi yakho
Indlela yokuthola i-niche enenzuzo，富图
Manje sekuyisikhathi sokugcina iphazili yethu-Indlela yokwenza imali izivakashi zakho zebhulogi.
Kulesi sigaba，ngizogxila ezindleleni ezintathu eziqondile zokwenza imali yebhulogi yakho esikhathini eside.
Lokho kusho，khumbula ukuthi kukhona izindlela eziningi zokwenza imali ku-intanethi。 Uma ubheka i-athikili ka-Ashley Faulkes，asimbozile ngaphezu kwe-100 imibono yebhizinisi e-inthanethi； uzobona ukuthi ukubhloga kumane kuyingxenye yesithombe esikhulu。伊米布索·奥库凡尼勒（Imibuzo okufanele uzibuze yona），伊克（Yile）
yini ongayenza ukuze wenze imali ngokushesha（esikhundleni somsebenzi wakho）
yimaphi amakhono，ulwazi okufanele unikeze umhlaba
I-Idea＃1-Bhala futhi uthengise i-eBook
我的电子书inikeza inani lezinzuzo：
Ukuzidala，konke okudingayo ulwazi osuvele unalo
Ama-books akhokhelwayo akha igunya lakho njengochwepheshe
Ungabathengisa kuzo amapulatifomu amaningi（例如Amazon futhi Ukukhokha）
Bangaba imithombo emikhulu yemali engenayo
Ochwepheshe abaningi baqala ukuzenzela igama nge-ebook。 Remit Sethi，umsunguli我们Ngizokufundisa Ukuceba futhi omunye ochwepheshe abakhulu kakhulu ebhizinisini le-intanethi，athengisiwe ibhuku lakhe lokuqala ye $ 4.95.
我的电子书yokuqala kaRamit – "Isiqondisi se-2007转自Kicker Ass".
Leyo bhuloho yaholela ku- I-New York Times畅销书kanye nemikhiqizo ye-premium ye-14 eyamenza waba umuntu ocebile kakhulu-konke okuphelele ku-intanethi futhi ngokuyinhloko kuthengiswa ngebhulogi yak.
Nansi Inqubo ongayilandela ukubhala电子书：
Khetha isihloko。 Bhala ngokuthile izithameli zakho ezifuna ukufunda，kepha ezingeke kufundiswe kokuthunyelwa kubhulogi okukodwa。 Abaningi bazimisele ukukhokhela isitolo esisodwa salolu lwazi.
达拉·乌拉卡（Dala uhlaka）。 Lokhu kuzosiza ukuhlela imibono yakho njengoba ubhala.
Vimba isikhathi nsuku zonke sokubhala。 Ungabi umuntu oqala i-book futhi ongakaze uyiqede。 Vimba ihora usuku ngalunye，amahora amabili，imizuzu ye-15-akunandaba ukuthi isikhathi esingakanani。伊巴哈尔·恩耶（Yibhale nje）.
Dlulisela ku-template ebheka ibhuku elihle。纳粹ezimbalwa kusuka ku-HubSpot.
Yakha ikhava（即Canva）noma ukhokhe i-freelancer yokwenza（i-coster设计师成本〜$ 26 / ihora njalo ngokusho kwenhlolovo yami yokubiza）
I-Photoshop ikhava yakho ku-3D电子书图像。 UPat Flynn wahlanganisa a ividiyo enkulu indlela yokwenza lokhu.
Uqedile！ Manje ukuphakamisa kokuqukethwe kwenhliziyo yakho.
I-Idea＃2：Khuthaza imikhiqizo ebambisene ngezimo ezihlukahlukene
Uma usuvele uxoxa futhi Kuncoma imikhiqizo namasevisi kuzilaleli zakho，kungani ungenzi imali kubantu obakhuluma nabo?
Akubizi abafundi bakho，futhi uthola ikhomishini lapho omunye wabo ethenga umkhiqizo.
Ukumaketha kokubambisana kungaba umthombo omuhle wokuthola imali encane yomsebenzi owengeziwe。 Hlola le mibono ngokufaka ukuthengisa okuhambisanayo kwimali engenayo：
Okokuqala，hambisa ama-athikili osuvele uwashicilele bese ubheka imikhiqizo noma izinsizakalo ozikhulumile。 Uma usubatholile，vele uye kuwebhusayithi ngayinye ubheke ikhasi elithi“ Affiliates”.
Bese ulandela imiyalo yokuba yisihlobo。 Uma usuye owodwa，ngokuvamile uzothola i-ID yokulandelela eyingqayizivele ukubeka ekugcineni kwe-URL ngayinye.
Uma isivakashi sichofoza kuleyo URL nge-ID yakho futhi ithengisa umkhiqizo，uzothola imali.
Yenza uhlu lwawo winke umkhiqizo nesevisi oyisebenzisayo。 Ngisebenzisa isofthiwe eminingi e-intanethi ehlobene nebhizinisi lami。 Lezi zingaba amathuba amasha okubambisana.
Iya kuwebhusayithi yomkhiqizo ngamunye futhi ubone ukuthi banalo yini ikhasi elihambisana nalo。乌玛·贝文扎（Uma Bekwenza）.
Njengoba awunakho okuqukethwe kwalokhu，乌扎丁加ukudala okunye.
Jot phansi ukuthi usebenzisa kanjani umkhiqizo noma isevisi。 Ingabe kusiza ukuhlehlisa umsebenzi wakho？ Ingabe ikusiza nge-SEO？印加贝·伊库萨扎·库提·乌菲涅勒·库巴布洛格·阿巴涅通亚?
Thuthukisa lokho okuthunyelwe ezithameli zakho，kuma社交媒体，nanoma iyiphi i-hubs enethiwekhi egcwele abantu abangase bafune imiphumela efanayo.
Ufuna ukusebenzisa umkhiqizo othile kepha awukwazi ukuwuthola？ Kuthiwani uma ungenza imali yakho ibuyiswe esikhathini esifushane?
Uma umkhiqizo unehlelo lokubambisana，lokhu kungenzeka okungokoqobo.
Okokuqala，yenza uhlu lwemikhiqizo / amasevisi ofuna ukuyisebenzisa。 Bese uya kumawebhusayithi abo bese ubona ukuthi banehlelo lokubambisana.
乌玛·本扎（Uma benza） Bese uyisebenzisayo，dala ucwaningo lwesifundo / ukufundisa，futhi ukhuthaze okuthunyelwe kuzethameli zakho njengowe ngaphambilini.
Lezi Zikhala Zihlala Zisebenza Isikhathi Eside，Zikulethe imali engenayo yokuphila kwendaba ngayinye.
I-imeyili iyithuluzi elinamandla lokumaketha。 Ngenye yeziteshi ezimbalwa abantu abazihlola nsuku zonke nokuthi zinjani izimisele ukudayiswa kuyo.
I-autoresponder ye-imeyli ukulandelana okuzenzakalelayo kwama-imeyili athunyelwa kubantu lapho bhalisa ohlwini lwakho lwe-imeyili.
Zombili zazo zikuvumela ukuba使用i-autoresponder.
Njengokugqugquzela imikhiqizo engabambisene kubhulogi yakho，ukugqugquzela le mikhiqizo ku-imeyli自动回复程序kungakuthola imali engenayo kuwe.
Ungazikhuthaza ngokuqondile kuma-imeyili noma udale ama-blog发布教程futhi uthuthukise lezo。 Noma Iyiphi Indlela，库霍纳ithuba lokungena.
Nakhu engikuphakamisayo nge-autoresponder yakho：
Qala ama-imeyili wakho ambalwa ngokuqukethwe okusebenzayo okungathengisi lutho。 Lokhu kuzokusiza ekuqaliseni ukuthembana nababhalisile abasha.
Phambanisa ubudlelwane ekwakheni ama-imeyili，njengokubuza ababhalisile bakho uma ungabasiza nganoma yini。 Lokhu kuzokwakha nokwethemba futhi kuncishiswe ukunciphisa.
Lapho ukhuthaza umkhiqizo，gxila emiphumeleni abangayithola hhayi kumkhiqizo uqobo。 Uma uzuze imiphumela ukuyisebenzisa，qiniseka ukuthi uchaza leyo ngemininingwane。 Lokhu kuzokwenza ukuthengiswa kwakho.
乌姆昆多（Umqondo）＃3：Hamba Ibhodi lomsebenzi
Amabhodi eJobane afana nabafuna umsebenzi nabaqashi。 Banganikeza i-gigs yesikhathi esigcwele，isikhathi sesikhathi，noma umsebenzi wesivumelwano.
Ngokwesibonelo，Ibhodi lomsebenzi Le-Problogger kufanisa amabhlogi nezinkampani ezifuna ukuqasha umuntu ukudala okuqukethwe久保.
Uma unegunya esikhaleni sakho futhi ungafanisa abafuna umsebenzi nabaqashi，ungabamba ibhodi lomsebenzi futhi wenze imali isikhathi ngasinye lapho umqashi efuna ukuthumela ukuvulwa komsebenzi.
Uma ungakwazi ukususa amaphuzu amathathu kuphela avela kulesi sihloko：
Yebo ungenza ngokuphila ngokubhuloga。 Abanye abasebenzisi博客作者phezulu bafumana izibalo eziningana kuya kweziyisithupha njalo ngenyanga.
Izindlela ezingcono kakhulu zokwenza imali ibhulogi yakho：Ukukhangisa，ukumaketha okubambisene，ukuthengisa imikhiqizo yakhe namasevisi.
Ikhwalithi lakho lokuqukethwe kwebhulogi ibalulekile。 Kodwa ukuze uqale ukwenza imali，ibhulogi yakho nayo inga ukuba ibe niche enenzuzo futhi ithole ithrafikhi eyanele.
Ngabelane abangaphezu kwabangu-12 bomuntu ukwenza imali ukubhuloga amacebo，amathiphu，nemibono kulokhu okuthunyelwe。 Ngingaba kakhulu，ngijabule kakhulu uma lokhu kukugqugquzela abanye ukuba bathathe isinyathelo esilandelayo bese uqala ukwenza imali ngebhulogi yakho usebenzisa amasu ashiwo.
Nasi isikhumbuzi sokugcina ngaphambi kokuqeda lo msebenzi：Imiphumela ivela esenzweni.
Abaningi abaza kimi esikhathini esidlule贝贝nezinsiza ezanele（amakhono，ulwazi，isikhathi）ukuqala ibhulogi nokwenza imali。 Kodwa bahlulekile-ngoba nabo贝贝nezizathu eziningi zokubambezela izinhlelo zabo futhi balinde izinkanyezi zivumelanise.
Ngiyakwazi ukukukhombisa indlela futhi ukususa izithiyo ezimbalwa endleleni。 Ukuze uphumelele，kuzodingeka uhambe umgwaqo ngokwakho.
Contents0.1 "Hey Jerry, ngingenza kanjani imali yokubhuloza njengakho?"0.2 Izibonelo zokuphila zangempela Nazi ezinye zezikhala